ITheku limincele isinqumo esiwujuqu ngemidlalo yePSL
UMGADLI weKaizer Chiefs uSamir Nurkovic okuzobe kuthenjelwe kuye ukuthi aqhubeke nokutakula Amakhosi uma sekubuye imidlalo ye-Absa Premiership
MINENHLE MKHIZE noZWELAKHE NGCOBO | June 28, 2020
SELOKHU kwathi nhlo uJulayi usuphenduke umshini ogayela umkhandlu weTheku, imali. Kulokhu intshe lizobe lome inhlama ngoba iVodacom Durban July izobukwa yizinyoni ngenhloso yokulandela imigomo yokulwa nokubhebhetheka kweCovid-19.
Osekumincelwe yiTheku, eligqemeke ingozi engeqiwa ntwala kwezomnotho kubhuntsha iComrades Marathon ethola kuyo izigidi, wukuthi izikhulu zePremier Soccer League (PSL) nezamaqembu zivumelane ngo-elethu emhlanganweni ongoLwesibili, ukuthi imidlalo izophothulelwa eThekwini.
Kulindeleke ukuthi ngoLwesibili iPSL iphume nesinqumo esingujuqu sokuthi izoqedelwa kuziphi izifundazwe imidlalo ye-Absa Premiership neyeGladAfrica. Izifundazwe okubhekwe ukuthi kuqedelwe kuzo imidlalo emiswe ngoMashi ngenxa yeCovid-19 yiGauteng neKwaZulu-Natal, okuvela ukuthi isethubeni elihle ngenxa yokuvunwa yisimo sezulu esingabandi, njengaseGoli. Okunye okuvuna iTheku ukuthi linamahhotela kanokusho nezinkundla ezisezingeni nezingagqagqene.
“Kuyathembisa kodwa ngingathi sino 99.9% osibeka ethubeni lokuphumelela ukusingatha imidlalo okunemigomo eqinile futhi engesiwona umdlalo. Kufanele kungabikhona ozohaqeka,” kusho umthombo.
Ethintwa okhulumela uhulumeni waKwaZulu-Natal uLennox Mabaso, uthe ngeke akwazi ukuphawula ngalolu daba. Exoxa ne-Independent Media uMato Madlala osabambe njengesikhulu esiphezulu kwiPSL, ugcizelele ukuthi akusekho ukuthatha kancane isikhathi sesonakele, ulande wathi: “Sinomhlangano ngoLwesibili. Izinto eziseqhulwini esizobe sikhuluma ngazo, ukuthunyelwa kwencwadi kwiFifa nokuthi sizoyiqedela kuphi imidlalo.
"Siyophinde sikhulume nangendaba yokuthi izoqala nini iligi ezayo. Isikhathi sidliwe yinja. Isifiso sethu wukuthi imidlalo yePSL neyeGladAfrica idlale umkanye ukuze iphele ngesikhathi esisodwa. Lokho kuyokwenza ukuthi kungakapholi maseko siqale imidlalo yokuhlungela."
Usho kanjena uMadlala, yingoba iligi ayiholayo ibhekene nenselelo yokuthi kuphelele le nyanga seyiyitshelile iFifa ngezinhlelo zayo zokuphothula isizini.
“Kuzokwenzeka. Sizobhunga ngezindlela ezizosiyisa phambili namalungu ethu ekutheni siphumelele ukuqedela isizini. Ukuhlala emahhotela amasonto ayisithupha kuzomba eqolo. Yingakho esikwenzayo kuzomele sikujulele, akulula neze. Kuzomele sibhukule.”
Akungatshazwa ukuthi amaqembu asembangweni wesicoco seligi anjengeKaizer Chiefs neMamelodi angakujabulela ukuzodlala eThekwini, kwazise anomlando wokunqoba izindebe kulesi sifundazwe.